Ighaghachi uzo ndi njem nlegharị anya nke Tanzania Mafia Island Style
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Podcasts » Ighaghachi uzo ndi njem nlegharị anya nke Tanzania Mafia Island Style
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • News • ndị mmadụ • Podcasts • Iwughachi • Safety • Akụkọ na -agbasa na Tanzania • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
A persona gburugburu echiche nke "njem ọhụrụ": Nwayọọ, immersive, ụdị, obodo, adigide, ihu igwe-enyi na enyi.
Typedị njem nleta ọhụrụ a gụnyere nri, ihe ọ drinksụ drinksụ, ịgba egwu, igwu mmiri, ụsọ mmiri ọcha aja, mmiri mmiri, ikiri nnụnụ, mkpuchi mbe, ọkụ ọkụ, njem okike, na ahụmịhe ọdịnala dị ịtụnanya. Ihe a niile na-abịa na ihu igwe ihu igwe na-eche ihu ma hazie ya ịhapụ COVID-19 dị anya n'azụ gị, mana dịrị njikere maka ya, ebe ọ dị ka ọ nweghị ebe ọzọ n'ụwa.
Tanzania na Zanzibar amaliteghachiri n'ụdị njem nlegharị anya ọhụrụ. Peter Byrne, CEO nke Agwaetiti Mafia na Tanzania, mepụtara usoro 20 ma webata ya na iwughari. njem n'elu ikpo okwu: “Ka anyi wulite mmadu na echiche nke 'njem ohuru ohuru' (nwayọ, nke miri emi, obi oma, nke obodo, adigide, enyi na enyi) na ile ọbịa nke oma, n'ihu, na etiti - dika 'ile ọbịa' ọ bụghị nke onye.
Na enweghi nsogbu obula coronavirus na obodo a no na East Africa, ulo oru nke ndi mmadu na eburu uzo mepee udiri ohuru nke otutu uzo ahia gha eme. Agwaetiti Mafia bụ osimiri mara ama na ọdụ mmiri na Tanzania.
Zipu na ozi olu: https://anchor.fm/etn/message
Kwado Podcast: https://anchor.fm/etn/support